SALLAL DUBAN: HALABUURKA, HANTIDA FAA'IIDADA LEH IYO KA HORTAGGA - GARLIC
Garlic wakhti dheer ayuu si fiican u dhistay sida qayb ka mid ah xiisaha badan ee cunnooyinka culus ee xafladaha dalalkeena. Laakiin dad yar ayaa og in nooca faa'iido leh iyo waxyeelada waxyeellada qoyan ee qashinka lagu shiiday. Bal aynu eegno arinkan.
Sallal duban: muuqaal iyo dhadhan
Muuqaalka muuqaalka alaabada dhamaystiran wuxuu ku xiran yahay sida aad u bilowday geeddi-socodka dabka: haddii ay ahayd dhan la dubay, ama haddii aad horey u burburisay, lagu jajabiyay gacan qabadka dhinaca garabka midigta ama mindhicir ah. Intaa waxaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo xaqiiqda ah in muuqaalka ugu dambeeya ee badeecada sidoo kale ay saameyn doonto heerka qiyaasta: Hooska iyo inta dheer ee geeddi-socodka waa, mugdiga ah ee toonta ugu dambeyn soo bixi doona.
Ma taqaanaa? Garlic wuxuu bilaabay inuu u koro sidii geed beeran oo ku dhow 5 kun sano ka hor Hindiya, halkaas oo ay u timid mahadnaqa Aryans. Si kastaba ha noqotee, wakhtigaas looma isticmaalin wax cunto ah sababtoo ah urka iyo dhadhanka adag.
Alaabta si haboon u diyaarsan ma lahaan doonaan urta dhawaaqa, iyo tayada dhadhanka ayaa si weyn u rogi doonta dhinaca dhexdhexaad. Natiijada kuleylka, daawadani waxay lumin doontaa qeyb muhiim ah oo ka mid ah ciribtirka iyo dabeecad aan caadi aheyn oo ka mid ah lidkeeda.
Si kooban ku saabsan faa'iidooyinka toonta
Dhammaan sifooyinka geedkaan waxay u sabab u yihiin maaddooyinka ku jira halabuurka. Waa in la ogaadaa in sheyga la shiilay uu leeyahay sifooyin tayo leh oo ka yar tii uu ka soo jeedo. Hoos waxaad ka heli doontaa sharaxaad kooban oo ka kooban halbeegga iyo sifooyinka wanaagsan ee sunta duban.
Baro wax badan oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo isticmaalka toonta.
Halabuurka Toonta waa mid aad u yar, marka la barbardhigo khudaarta kale, qiyaasta biyaha waa keliya 60%. Carbohydrates waxay ka dhigan tahay ilaa 33% mugga hartay, 6-9% waa borotiino. Qiyaastii 0.5% ayaa la siiyaa dufanka. Qayb badan oo qayb weyn ayaa ku leh sonkor kala duwan - ilaa 25%. Maaddo bixisa antioxidant, antitumor iyo guryaha lidka bakteeriyada waxaa lagu magacaabaa allicin. Qalabka organoleptic ee badeecadani waxay ku siinaysaa joogitaanka isugeyntiisa oo ah qadar ku filan oo saliid ah lagama maarmaan (ilaa 0.8% wadarta guud).
Ma taqaanaa? Dhamaan qarniyadii dhexe, dadku waxay rumeeyeen in toonta ay ilaalin karto guriga, ka dibna dharbaaxada ayaa la dhigey albaabka guriga.
Waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu faa'iido leh oo si fiican loo yaqaan ee sheygan waa in lagu muujiyo awooda dabiiciga ah ee lagu burburiyo sheyga waxyeelada leh ee noocyada halista ah iyo cudurada. Intaa waxaa dheer, Sababtoo ah walxo kala duwan oo bayooloji ah oo ku jira qayb ka mid ah toonta, waxay ku darsataa dhiig-yaraynta, taas oo ka dhigaysa habka ugu fiican ee ka hortagga thrombosis.
Isticmaalka joogtada ah ee toonta ayaa si weyn u yareyn kara heerarka dhiigga ee dhiigga, iyo sidoo kale hoos u dhigidda cadaadiska dhiigga. Waxa kale oo ay gacan ka geysataa habaynta habsami-u-socodka caloosha iyo xajinta halista wadno-xanuunka iyo faaliga.
Waxaanu kugula talineynaa inaad ogaato nooca cudurada aysan aheyn in ay isticmaalaan toon.
Haddii guryaha la lumiyo ka shaqaynta kululaynta: ka badan toonta la dubay waa faa'iido leh
Daaweynta kulaylka waxtarka leh waxay ku kordhineysaa khasaaraha qaybta ah ee badeecada asaasiga ah ee asalkeeda asaasiga ah sababtoo ah burbur ku yimaadda qaar ka mid ah walxaha bayolojiga firfircoon. Garlic ma aha mid ka reeban, laakiin ka dib markii la shiidaa waxay u qaadataa nadaafad gaar ah, dhadhanka qani ah, laakiin lumiso qeyb weyn oo ka mid ah tayada mucjisada.
Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah saynisyahannada ayaa ogaaday in geeddi-socodka lagu tolayo saliid lagu dubay saliid gabbaldayaha, gaar ahaan aan loo baahnayn, waxay awood u leedahay in ay sii daayaan qadar badan oo ah xashiishado lacag la'aan ah iyo alaabo kale oo kala geddisan oo keeni kara cudurro kala duwan, oo ay ku jiraan oncology.
Waa muhiim! Marka aad tolaysid sharoobada, iskuday inaad isticmaasho sunfloor ama saliid saytuun ah - sidaas awgeed waxaad yaraynaysaa waxyeelada inaad cunta cuntadan.
Siyaabaha loo kariyo toonta
Waxaa ka mid ah hababka ugu caamsan ee wax lagu kariyo badeecada guriga, waxaa jira labo: digsiga iyo caawinta foornada ama kariyaha. Natiijada isticmaalka hababka labaduba waa isku mid, marka laga reebo inta lagu jiro habka wax lagu kariyo ee foornada wax yar oo walxo waxyeelo kala duwan la sii daayo.
Toonta la qalajiyey waxaa loo isticmaalaa in la siiyo saxanka dhadhanka gaarka ah iyo urta.
Habkani wuxuu diyaar u yahay waqti gaaban, sidaa daraadeed waa faa'iido badan in la isticmaalo haddii lagaa xaddido kheyraadka ku meel gaarka ah. Halkani waa algorithm qiyaasta cunto kariska:
Qaado toonta, u kala qaybi xiirto shakhsi ahaaneed una diiri.
Ku dar qadar yar oo saliideed ah kuna rid kilkilooyinka.
Daar saxanka kuleylka ah dabka dhexdiisa, ku rid digsi qaboojiye ah oo sug intaad saliidda ka dhalato.
Iska yaree kuleylka si aad u yar oo isku shiil leh toon, kareyso marmar.
Waqtiga karintu wuxuu u dhaxeeyaa 10 ilaa 25 daqiiqo. Calaamadaha saxda ah ee la dhammeeyaa waa jilicsanaanta ay isku midka yihiin marka la barbardhigo bilowga hore ee qiyaastii kala badh iyo dhismaha qolof casaan.
Nidaamkan diyaarinta waa midka ugu caansan sababtoo ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka ilaaliso casiirka iyo dhadhanka dhadhanka sheyga. Waxay qaadataa waqti ka badan habka hore, sidaas darteed isku day in aad si taxadar leh u xisaabiso waqtiga dhamaystirka ee kariska, haddii aad rabto in aad u adeegto saxanka miiska marka la joogo.
Ka hubso siyaabaha ugu fiican ee aad u goosan kartid uguna kaydiso toonta xilliga jiilaalka.
Qaado heerkulka foornada ilaa 180 darajo.
Ka jar dhammaan kabaha laga soo jaray toon, laakiin madaxa ha u kala qaybin jarjar gooni ah.
Iska yaree dusha sare ee xididka sida habka jidhka loo arki karo.
Ku duub toonta ciida ama ku rid wax caaryar ah, ka dibna ku daadi dusha qadar yar oo saliid saytuun ah kuna rusheey milix.
Ku dar toonta foornada iyo dubi ilaa 40 daqiiqo. Ilkaha ilkaha waa inay si fiican u jilciyaan oo ay u helaan qolof casaan. Haddii aad aragto in alaabtu aanay diyaar u ahayn, waxaad ku dari kartaa foornada 10 daqiiqo oo kale.
Waa muhiim! Ha ku degdegin inaad ku shubtid saliida ay kuugu yiileen. Waxay leedahay caraf cajiib ah iyo dhadhan cajiib ah. Waxaa si wanaagsan loogu isticmaali karaa diyaarinta suxuunta kala duwan iyo suugada.
Tirada iyo qiimaha maalinlaha ah
Halbeegga alaabtaani ma laha qaybo xitaa in xitaa ay ku badan tahay dhibcaha waxay waxyeeleysaa jirkaaga. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in cuntada ay tahay qof caafimaad qaba in la isku dheelitiro oo ay ku jiraan tiro badan oo ah cuntooyin kala duwan. Markaa kadib waxaa suurtagal ah in la sheego in qofku ka faa'iideysto waxtarka ugu sarreeya dhammaan alaabooyinka ku jira liistadiisa maalinlaha ah.
Badanaa, dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan in aysan isticmaalin wax ka badan 6-7 ilkood oo ah alaabtan maalin kasta. Si kastaba ha ahaatee, qadar badani ma keenayso waxyeelo badan oo jidhkaaga ah, si kastaba ha ahaatee, nafaqooyinka ku jira qiyaasta ee toonta la kariyey, in ka badan tani, si habboon looma nuugi doono oo si fudud u gudubto marinka mindhicirka.
Ma jirtaa wax faa'iido leh oo ka soo jiidaya toonta
Dad badan ayaa aaminsan in toogashooyinka toonta, iyada oo aan jiritaanka jiritaanka dhirta lafteedu aysan suurtagal ahayn, maaha wax ka badan si aan toos ahayn oo si toos ah loogu daro toon. Si kastaba ha noqotee, sida farsamadu muujinayso, ma aha oo kaliya faa'iido ahaan loo isticmaali karo karinta, laakiin sidoo kale waxay ka soo qaadaan waxoogaa iyaga ka mid ah jirkaada.
Gawaarida garabka waxaa loo isticmaalaa maaha oo kaliya karinta, laakiin sidoo kale daaweynta cuduro badan.
Rootiyaal qoyan waxaa ku jira xaddi badan oo fiitamiin ah, oo ay ku jiraan A, PP, C, B6 iyo B12, walxaha waxtarka leh, iyo waliba walxo kala duwan oo bayoloji firfircoon oo leh astaamaha antioxidant. Dadka u cuntadan si joogto ah, u sheeg in ay ka qaybqaato dib u soo kabashada guud ee jidhka - labadaba muuqaal iyo xaalad guud ayaa soo fiicnaanaya. Shaqada mareenka caloosha iyo mindhicirka ayaa sii fiicnaanaya, khatarta xanuunka atherosclerosis iyo thrombosis waa la yareeyaa, iyo suurtagalnimada cudurada fayras ee xilliyada kala duwan ayaa sidoo kale la yareeyaa.
Sida ku jirta xaalada tufaaxa, faa'iidooyinka fallaadhaha la shiilay waxay hoos u dhacaan qaar ka mid ah hababka dabiiciga ah ee yaraynta feejignaanta walxaha firfircoon ee bayoolajiga ah ee iyaga ku jira iyo kala-goysyada qaybaha kakooban ee kuwa fudud. Kalluunka ku daraya geedi socodka wax lagu karsado ayaa sidoo kale keena in la yareeyo siyaado dheeraad ah ee faa'iidada saxanka. Dadka ku hawlan miisaanka luminta oo u isticmaal badeecadan inay noqoto cunto, waa inaad sidoo kale fiirisaa xaqiiqda ah in fallaadooyinka la shiilay ay si weyn ugu daraan waxyaabaha ay ku jiraan kalooriga. Tilmaamahan wuxuu kobcayaa 24 kcal halkii 100 g oo ah badeecada qashinka cawska ah ilaa 90-95 kcal oo la shiilay.
Ugu horreyntii, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa xaqiiqda ah, sida cuntooyinka kale ee cuntooyinka kale, toonta la dubay waxay sababi kartaa dareen-celinta xasaasiyadda hoose ee darnaanta kala duwan, ilaa cudurka anjioedema. Sidaa darteed, haddii aad qabtid xasaasiyad, markaad isticmaasho alaabadaan waxaad u baahan tahay inaad taxaddar yeelatid.
Waxyaabahaas laguma talinayo in la isticmaalo dadka qaba xanuunka gastritis, boogta feeraha iyo xanuunka loo yaqaan 'pancreatitis' ee qaababka ba'an, maxaa yeelay waxay ka xanaajin kartaa jiritaanka xanuunka iyo ka sii darista calaamadaha kale ee cudurka. Toonta dufanka leh, dabcan, waxay saameyn ku leedahay jirkeena. Isku day inaad ka qayb qaadatid waxyaabahan suunka ah ee caadiga ah - waxay kaa caawin doontaa inaad hesho noocyo cusub oo cajiib ah oo la isku qurxiyo iyo noocyo cunto, iyo waliba faa'iido jirka oo idil.